Qaybta isku dhafka budada guud ahaan waxay leedahay shaqooyinka isku dhafka budada iyo kaydinta budada.
Qalabka Daqiiqda ee Mashiinka wax-shiidka daqiiqda ee is haysta ee warshadda oo dhan waa la naqshadeeyay oo lagu rakibay taageero qaab dhismeedka birta ah.Qaab dhismeedka taageerada ugu weyn wuxuu ka kooban yahay saddex heer: mishiinnada rullaluistu waxay ku yaalaan dabaqa hoose, shaandhada ayaa lagu rakibay dabaqa koowaad, duufaanada iyo tuubooyinka pneumatic waxay ku yaalaan dabaqa labaad.
Qalabka ka soo baxa rullaluistuyada waxaa kor u qaadaya habka wareejinta oofwareenka.Tuubooyinka xiran waxaa loo isticmaalaa hawo-qaadista iyo siigada.Dhererka aqoon-is-weydaarsigu aad buu u hooseeyaa si loo dhimo maalgashiga macaamiisha.Farsamada wax lagu shubo waa la hagaajin karaa si loo qanciyo macaamiisha shuruudahooda kala duwan.Nidaamka kantaroolka PLC ee ikhtiyaariga ah wuxuu xaqiijin karaa kantaroolka dhexe oo leh heerar sare oo otomaatig ah wuxuuna ka dhigi karaa hawlgalka mid fudud oo dabacsan.Hawo-qaadashada xiran waxay ka fogaan kartaa boodhka ku daataan si loo ilaaliyo xaalad shaqo oo nadaafadeed oo sareysa.Warshada oo dhan waxa lagu rakibi karaa bakhaar, nashqadona waa loo habayn karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha kala duwan.
Si weyn looga isticmaalo beeraha, warshadaha, dukaamada badarka iyo goobaha kale ee lagu farsameeyo badarka.
Waxaa loo adeegsadaa in laga saaro wasakhda fudud sida buunshaha, siigada iyo kuwa kale, wasakhda yaryar sida ciidda, iniinaha cawska yar yar, badarka yar ee la jarjaray iyo wasakhda qalafsan sida cawska, ulaha, dhagxaanta iwm ee ku jira Hadhuudhka weyn.
Qalab-jabiyaha taxanaha TQSF ee nadiifinta hadhuudhka, Si loo saaro dhagaxa, Si loo kala saaro hadhuudhka, Si loo saaro wasakhda iftiinka iyo wixii la mid ah.
Kala soocida vibro-ga waxqabadka sare leh, oo ay weheliso kanaalka hamiga ama nidaamka rabitaanka dib-u-warshadaynta ayaa si weyn loogu isticmaalaa warshadaha daqiiqda iyo silooska.
Shaashadda rotary ee diyaaradda waxaa inta badan loo isticmaalaa nadiifinta ama kala saarista alaabta ceeriin ee wax lagu shiido, quudinta, bariiska wax lagu shiido, warshadaha kiimikada iyo warshadaha soo saara saliidda.Adiga oo bedelaya shabaqyada kala duwan ee shaandhada, waxay nadiifin kartaa wasakhda sarreenka, galleyda, bariiska, iniinta saliidda iyo walxaha kale ee granular.
Shaashadda waa mid ballaaran ka dibna qulqulka ayaa weyn, waxtarka nadiifinta ayaa sarreeya, dhaqdhaqaaqa wareegga siman waa mid deggan oo leh buuq yar.Ku qalabaysan kanaalka hamiga, waxa ay qabataa jawi nadiif ah.